Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo
Ikhaya > Imikhiqizo > Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo
(Yonke imikhiqizo engu-2 ye-Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo. Nikeza ikhwalithi ephezulu Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo ngentengo ephansi eshibhile.
I-Model No.: CL-ST0019
Igama lomkhiqizo: i-stethoscope yombili-ikhanda lokusebenzisa ukusetshenziswa Item: CL-ST0019 Imininingwane: Qedela ngamasethi amabili wezinto zokudlala uvumela uthisha nomfundi ukuba balalele kanyekanye. Indwangu yensimbi engenasici engenamacici...
Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo ngokuqondile kusuka ku-Ukusetshenziswa Kwesithandisi Somlilo abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.